Eebbifamtoonni Yuunivarsiitii Jimmaa meeshaa ciniinsuu hordofu kalaqan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Haannan Badhaasicha yommuu fudhattu
Haannaa Xilahunii fi hiriyyootni ishee biroo afur Yuunivarsiitii Jimmaa irraa barnoota Baayoo-medikaal Injiineriingi jedhamuun A.L.I bara 2010 eebbifaman.
Barattoonni kunneen waa'ee fayyaa haadholiifi daa'immanii yaaduu kan jalqaban osoo eebbaaf hin dhaqqabiin dura ture.
''Nuyis dubartoota waan taaneef borus kan nu mudatu waan ta'eefi,'' jedhu.
Kanaafuu waraqaa eebba isaanii yeroo hojjetan dhimma kanaaf furmaata tahuu waan danda'u yaaduun meeshaa yeroo dahumsa miixuu ykn ciniinsuu haadholii to'achuuf gargaaru hojjechuuf murteessan.
Kalaqni Waraqaa akkamiin adunyaa kana jijjiiree?
Yaad-rimeen isaan jalqaban kun cimaa adeemuun meeshaa (Agumentation and Induction Monitoring Device) jedhamu hojjechuun dhugoomsan.
Hojii kalaqaa kana hiriyyoota waliin hojjetan keessaa shamarreen ganna 23 Haannaa Xilahun, isheef hiriyonni ishee hojii qorannoof jaalala addaa akka qaban dubbatti.
Haala tajaajila dahumsaa haadholii ilaaluuf hospitaalota akka Yuunivarsiitii Jimmaa, Xiqur Ambassaa, fi Xoor-Haayilochi daawwatanii, ogeessota waliinis mari'achuu himti.
Haadholiin dahuuf qophii tahuufi dhiisuu ogeessotni kan adda baafatan quba isaanii karaa fiixee gadameessaa galchuun akka ta'e kan dubbattu shamarreen kun miira kun namatti uumu hubachuuf yaaluu dubbatti.
Image copyright Hana Tilahun
Goodayyaa suuraa Meshaa ciniinsuu 'to'atu' barattoonni kalaqan
Haala kanaan ture meeshaa tutuqqaa harkaa malee haadholiis tahe ogeessotaa ciniinsuu irratti deeggaru kalaquun faayidaa guddaa akka qabu hubachuu kan danda'an.
Meeshaan isaan kalaqan kun bifa saqqiin kan hojjetame yoo tahu garaa dubartii irra kaa'uun miixuun jalqabuufi jalqabuu dhiisuu kan ittiin baruun danda'amudha.
Qorichi hammamii akka haadha sana barbaachisuus meeshaan agarsiisu akka waliin kalaqame Haannaan dubbatti.
Haannaan akka jettetti meeshaan kun carallaa elektirikaa kan hin qabneefi fayyaa haadhaa irrattis tahe fayyaa daa'imaa irratti dhiibbaa hin qabnedha.
''Akkuma altiraasawundii tahee garaagarummaan isaa altiraasaawundiin suuraan yommu agarsiisu kan keenya ammoo lakkoofsaan ibsa,'' jetti.
Meeshaa kana meeshaalee nannootti bifa salphaan argamanii fi kan biraa ammoo gatii rakasaan biyya alaatti fichisiisuun akka hojjetan kan dubbattu Haannan walumaagalatti Birrii 2,500 qofa akka itti baasan dubbatti.
Ulfaatinni isaa Kg1.5 yoo tahu bakkaa bakkattis fuudhanii socho'uuf salphaadha. Akkasumas daqiiqaa 30 keesatti namni tokko itti fayyadama isaa irratti leenjii gabaabaa yoo fudhate ittiin hojjechuu danda'a jette.
Fuuldurattis haala humna elektirikaa biyya keenyaa yaada keessa galchuun akka baatiriidhaan hojjetu gochuuf karoora akka qaban himteetti.
Meeshaa akkasii kana biyyootni guddatan kan itti fayyadaman yoo tahu gatiin isaa mi'aa tahuu isaa irraa kan ka'e hospitaalota daawwanne keessatti illee hin argine kan jettu Haannann 'bu'aa guddaa fida jennee abdanna,' jette.
Dorgommii irratti mo'achuu irra kan darbe meeshichi sakatta'amee hojii irra oolchun abjuu Haannaa fi hiriyyota isheeti.
Goodayyaa suuraa Haannaan badhaasicha yommuu fudhattu
Bu'aa akkamii qabaata?
Ogeessa dahumsa haadholii kan ta'an Obbo Yaalew Laayiqer haati tokko miixuu irratti humna daa'ima of keessaa baasuu yoo dhabde qorichi miixuu ariifachiisuuf gargaaru (Augmentation) ni kennamaaf jedhu.
Gama biraan ammoo guyyaan dahumsa ishee gahee miixuun yoo jalqabuu didee fi ulaan gadameessa ishee cufaa tahe qorichi fayyadaman(Induction) akka jiru dubbatu.
Kuni hundi tahees ogeeyyiin quba isaanii gara gadameessa haadhaa galchuun haala irra jiru ilaaluun dirqama jedhan.
Muuxannoo qaban irraa biyyoota akka Ameerikaa fi Ingiliiz malee Itoophiyaa keessatti meeshaa kana to'achuuf gargaaru akka hin argines dubbatan.
Meeshaan biyya alaatti argan al takkaatti haala dahumsaa haadholii kudhanii hordofuu danda'a jedhan.
Meeshaaleen akka kanaa humna namaa xiqqaadhaan hojii baay'een akka hojjetamu taasisa jedhan.
Kalaqa barattoota kanaa kan dinqisiifatan ogeessi kun, keessumaa biyya akka keenyaa haati tokko yeroo deessu namni kamiyyuu qaama hormaataa ishee akka tuquu fi ilaalu hin barbaanne keessatti meeshichi barbaachisaadha jedhu.
Haadholiin yeroo miixuu fi dahumsaa qaana'uufi rifachuun qaamni isaani inumaayyuu akka of gadhiisu hin godhan jedhu.
Kana irraa ka'uun meeshaan amma hojjetame hojicha salphisuufis tahe rakkoolee kanneen hiikuuf faayidaa guddaa qaba jedhan.
Haa tahu malee teekinolojiin hundinuu faayidaa fi miidhaa mataa isaa waan qabuuf gama saayinsiin qorachuufi guddisuu barbaada jedhan.
Dorgommii wal tahinsa waldaa 'Association for Promotion Science in Africa' (APSA) fi Ministeera Infoormeeshinii fi Teekinoloojii Itoophiyaan qophaa'e kan hojiileen kalaqaa 129 dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaan hojjetaman irratti dhiyaatan irrattis meeshaan kun sadarkaa tokkoffaan injifateera.
'Ilmi Mootii Saawudii ajjeechaa Kaashogjii itti gaafatmoo ta'u hin olle'